အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး > မွန်သတင်းအေဂျင်စီ
Home / မေးမြန်းချက် / အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး
မွန်သတင်းအေဂျင်စီ November 18, 2014 မေးမြန်းချက် Leaveacomment 153 Views
စကားချပ်။ ။ ၉ ကြိမ်မြောက် ASEAN SUMMIT အာရှထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲသို့ အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမား နေပြည်တော်တွင် ရောက်ရှိနေစဉ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့၌တွေ့ဆုံခဲ့ရာ မွန်တိုင်းရင်းသား အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာဗညားအောင်မိုး ပါဝင်ခဲ့သည်ကို IMNA ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်–အယ်ဒီတာ
IMNA- သမ္မတအိုဘာမားနဲ့ ဆရာတို့ဘယ်လို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသလဲ?
ဗညားအောင်မိုး-လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ််တော် နာယက၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥက္ကဌ အမျိူးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌနဲ့ ပြည်သူလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အမျိူးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖိတ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်တဲ့သဘောပါ၊ သမ္မတ အိုဘားမား စကားပြောပီးတဲ့နောက် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ပြည်သူလွှတ်တော်ဥက္ကဌ အမျိူးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌတို့က စကားပြောတယ်၊ ပြီးတော့ကျနော်တို့တစ်ယောက်စီ ၅ မိနစ် လောက် တင်ပြဆွေးနွေးတယ်၊ Round Table Discussion လို့နာမည်ပေးပါတယ်၊ အဲဒီပုံစံအတိုင်းနဲ့့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ယောက်စီကနေ ဆွေးနွေးတင်ပြနိုင်အောင်ပေါ့ဗျာ။
IMNA-ဆရာကသမ္မတအိုဘားမားကို အဓိကအချက်အနေနဲ့ ဆရာဘာတွေ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသလဲ?
ဗညားအောင်မိုး-ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ ကျနော်တို့ဒီမိုကရေစီအရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖွဲ ့စညး်ပုံအခြေခံဥပဒေကို ဖက်ဒရယ်အနေနဲ့ကိုက်ညီအောင် ကြိုးစားပြီးတော့ပြင်နေပါတယ်၊ တကယ်လို့ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ တိုင်းရင်းသားလူမျိူးများရဲ့ အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရရှိရေး တန်းတူ ဖော်ဆောင်နိုင်မယ်၊ ဖက်ဒရယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ်၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ ့အစည်းများကလည်း ဒီဖွဲ ့စည်းပုံကိုလက်ခံတယ်ဆိုရင် ငြိမ်ချမ်းရေးဟာ မြန်မြန်ခရီးရောက်မယ်လို့ အဲဒီအကြောင်းတွေဆွေးနွေးပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ နောက်တစ်ခုကတော့ အမျိူးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌကပြောသွားတာက ကျနော်တို့ နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ဖွံဖြိုးမူဟာအတော်လေးကိုအရေးကြီးပါတယ်၊ ဒီတိုးတက်ဖွံဖြိုးမူအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံကို အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ်လစီကို To The Change အကုန်အစင်ပြောင်းလဲပီးတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ကိုအကူညီပေးပီးတော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ဖွံဖြိုးမူကို လုပ်ပေးပါ အဲဒီတော့မှ ကျနော်တို့နိုင်ငံဟာလဲ စီးပွားရေးအရဖွံဖြိုးတိုးတက်လာမယ်လို့ ပြောသွားတယ်၊ ကျနော်ကလဲဥက္ကဌတင်ပြချက်ထောက်ခံပါတယ်၊ အဲဒီအချက်ကိုထောက်ခံတာဟာ Economic Good ကြောင့်စီးပွားရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမူကြောင့် ဒီမိုကရေစီတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုဟာ အင်မတန်မြန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ဆီမှာ ပညာရေး နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်ဆွေးနွေးသွားပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျနော်တို့ဆီမှာ အင်္ဂလိပ်စာ အတော်လေးညံ့ပါတယ်၊ ဘာသာစုံည့ံတာက တော့မပြောကောင်းလို့ ကျနော်မပြောပါဘူး၊ အခုအမေရိကန်က NGO အဖွဲ့တစ်ဖွဲ ့ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကူညီပြီးတော့ မော်လမြိူင်တက္ကသိုလ်မှာလုပ်ငန်းအကောင်ထည်ဖော်နေတာရှိပါတယ်၊ သူတို့ရည်ရွယ်ချက် လုပ်ငန်းအကောင်ထည်မဖော်ရသေးခင်မှာ တစ်နှစ်လောက်ဆရာဖြစ််သင်တန်း Training of Trainer ကိုလုပ်နေရပါတယ်၊ ကျနော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်မူအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံက အကူအညီပေးဖို့တစ်ချက် ကျနော်တင်ပြလိုက်တယ်။
နောက်အချက်တစ်ချက်ကတော့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဟာ အင်မတန်အန္တရယ်ကြီးနေပါပြီ၊ ဒီကနေ့ကလေးတွေအထက်တန်းကျောင်းအထိပြန့်နှ့့ံနေပါတယ်၊ ဒီမူယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်ရေးမှာလဲ ကျနော်တို့နိုင်ငံနဲ့ ပါ၀င်ဖို့ ကျနော်တိုက်တွန်းပါတယ်၊ အဲဒါတွေကျနော်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ဗညားအောင်မိုး -သမ္မတကလဲပြန်ဆွေးနွေးပါတယ်၊ သူက တိုင်းရင်းသားတန်တူအခွင့်အရေးရရှိရေး Ethnic right က အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့၊ စည်းလုံးညီညွတ်မူရဖို့အတွက် အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်တဲ့၊ နောက်တစ်ခုထပ်ပြောသွားပါတယ်၊ အင်အားနည်းတဲ့ လူနည်းစုလူမျိူးတွေကို စောင့်ရှောက်ကူညီဖို့ဟာလဲ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်၊ အဲဒီတော့မှလဲစည်းလုံးညီညွတ်မှုရပါမယ်တဲ့၊ ဒီလိုလူမျိူးစုနဲ့ ယဉ်ကျေးမူကွဲပြားတဲ့နိုင်ငံမှာ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ သူကအကြံဉာဏ်ပေးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကဖွဲ ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျနော်ပြောသွားပါတယ်၊ အဲဒီမှာ သူကဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို မသုံးသွားပါဘူး၊ ဘယ်လိုသုံးသွားလဲဆိုတော့ We are Centralization ဗဟိုထိန်ချူပ်မူလျော့ချရေး Decentralization နောက်ပီးတော့ Devolution အာဏာခွဲဝေပေးခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ခွဲဝေပေးရေး၊ အဲဒီ ၃ ခုကိုအဆင်ပြေမျှတအောင် သင့်တော်အောင် ချိန်ဆပီးတော့အသုံးချဖို့လိုမယ်လို့ပြောသွားပါတယ်၊ ဒါကတော့ဖက်ဒရယ်မူနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သူအဲဒီလိုရှင်းပြသွားတယ်၊ ကျနော်တို့ဒီကနေ့အတွက် နောက်ဆုံးကောက်ချက်တစ်ခုက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အရည်အချင်းကလေးစားလောက်ပါတယ်၊ အခုဒုက္ခခံနေတာက ကျနော်တို့လူကြီးပိုင်းများတာကိုယ်း၊ ကိုယ့်သက်တမ်းမှာမခံစားရပေးမယ့် နောင်လာနောက်သားတွေ အကျိုးခံစားရမှာပဲလို့ သူကပြောသွားပါတယ်။
IMNA-နောက်ပီးတော့ သူ့အပေါ် ဆရာဘယ်လိုသုံးသပ်လိုပါသလဲ?
ဗညားအောင်မိုး -သူကတစ်ခုခုကိုဦးတည်ပီးတော့ specific ပုံစံမျိူးမပြောဘူး၊ principal နဲ့သံတမန်နည်းနဲ့လဲကျရတယ်၊ အခြားတိုင်းရင်းသားတစ်ဦးဦးရဲ့အကြောင်းကိုလည်း သူမပြောဘူး၊ ဒါပေမယ့် အားလုံးအတွက်ကို ခြုံပြီးတော့ ပြောသွားတယ်။
IMNA-လက်နက်ကိုင်အဖွဲ ့စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သူမှတ်ချက်ပြောဆိုသွားတာရှိသလား?
ဗညားအောင်မိုး-အဲဒါတွေတော့ အတိကျပြောသွားတာမရှိဘူး၊ လုပ်ပါ အားပေးပါတယ်လို့ပဲ ပြောသွားပါတယ်။ နောက်တစ်ခုပြောသွားတာက အမေရိကန်သံအမတ်ကနေတဆင့် “အိမ်ဖြူတော်” ကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။
IMNA- နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆရာဘာတွေထပ်ဖြည့်စွက် ပြောစရာရှိပါသလဲ?
ဗညားအောင်မိုး-အခုတွေ့ဆုံပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာတွေက ကြိူက်သလိုဆွဲပီးတော့ ရေးထားတာလဲရှိတယ်၊ ကျနော်အကဲခတ်ကြည့်တာ အိုဘာမား မပြောတာကို ပြောသလိုလို၊ နောက်ပီးတော့နည်းနည်း ပြောတာကိုအကျယ်ချဲ့တာ အမြတ်ထုတ်တာလဲရှိဦးမယ်၊ ဒါကတော့ သူ့တို့ရဲ့အာဘော်အပေါ်မှာ မူတည်နေတယ်၊ မလိုတာမလိုသလို လိုတာလိုသလိုဆွဲရေးနေတာက မမှန်ဘူး၊ အဲဒါတွေက အများကြီးသတိထားရမယ်။
Previous ခွေးရူးပြန်ရောဂါ ကင်းစင်းရေး လူထုပညာပေး ဟောပြောပွဲကျင်းပ
Next အခြေခံဥပဒေမပြင်သေးလည်း အပစ်ရပ်ဆွေးနွေးပွဲ မထိခိုက်နိုင်ဟု နိုင်ဟံသာပြော